အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
အဗ်နာ နှင့် ပရိတ်သတ်များ
အဒါလသ်(ခ)တရားမျှတမှု၊ကျောသား၊ရင်သား မခွဲခြားမှုကိုလက်တွေ့ အကောင်၊အထည်ဖေါ်ခြင်း ဆိုတာကို ရှင်းပြ ပေးပါအုန်း …
ဇနျနဝါရီ ၉, ၂၀၁၈ - ၁၁:၃၁ ညနေ News Code : 876598 Source : ABNA Link:
အဒါလသ်(ခ)တရားမျှတမှု၊ ကျောသား၊ရင်သား မခွဲခြားမှုကိုလက်တွေ့ အကောင်၊အထည်ဖေါ်ခြင်းဆိုသည့်အချက် ကို ABNA ပရိတ်သတ်များ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ရှင်းပြထားပါတယ် ။ အေမာမ် ဟိုစိန် (အ.စ) ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ မှ သတ္တမရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်၏ တရားကို ကိုးကားထားပါတယ်။
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)ဖူးပွင့်ရသည့်၊ကြွ မြန်းလာရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များမှ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ မနုဿလူသား အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အဒါလသ်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်သည် မည်မျှအရေးကြီးသည်ဆိုလျှင် ရည်ရွယ်ချက်အစစ်၊အဓိက၊ (သို့မဟုတ်)တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှ တစ်ခုဟုစာရင်း သွင်းနိုင်ပေသည်။
ဟုတ်ပါသည်။မှန်ပါသည်။တမန်တော်များ(အ.စ)၊အောင်လီယာတော်များ၊ ကောင်းကင်ကျကျမ်းဂန်များအားလုံးသည်အဒါလသ်အား လက်တွေ့အကောင်အ ထည်ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပေသည်။
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်(အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်)အနေဖြင့် မိမိ၏တမန်တော်မြတ်များ (အ.စ)ကိုထင်ရှားပြတ်သားသည့် သက်သေအထောက်အထားများဖြင့် စေလွတ် တော်မူခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်၎င်း(တမန်တော်များ(အ.စ))အားကောင်းကင်ကျကျမ်း ဂန်နှင့် မီးဇန်း(အမှန်နှင့်အမှားအတွက်စံမှတ်ကျောက်၊တရားမျှတသည့်ဥပဒေသများ) ကိုပို့တော်မူခဲ့ပါသည်။ထိုမှသာ လူထုအနေဖြင့် အဒါလသ်ကို လက်တွေ့အကောင်အ ထည်ဖေါ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပေသည်။သံသတ္တုအားဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။ဤ(သံသတ္တု)တွင် ပြင်းထန်သည့် အင်အား၊လူထုအတွက်၊လူသားအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်း ရှိပါသည်။ထိုမှသာ မည်သူတစ်ဦး၊တစ်ယောက်သည် အရှင်မြတ်ကို မမြင်ရဘဲ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်နှင့်အရှင်၏ တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)ကို ကူညီ ကြောင်းခွဲခြားသွားရန် ဖြစ်ပေသည်။မုချဧကန် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် အင်အား၊စွမ်းအားရှင်နှင့်(မည်သည့်အခါမျှ)ရှုံးနှိမ့်တော်မူမည့် အရှင်မဟုတ်ချေ။
မှန်လှပေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် မိမိ၏တမန်တော်မြတ်များ (အ.စ)အား ကောင်းကင်ကျကျမ်းတည်းဟူသည့် လက်နက်၊ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများနှင့် မီးဇန်ဖြင့် ပြည်သူလူထုဖက်သို့စေလွတ်တော်မူ ခဲ့ပေသည်။ထိုမှသာ ကစ်(သွ)ခေါ် မတရားမှု၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုအား တော်လှန်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။လူထုအား အဒါလသ်ဖက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ရန် ဖြစ်ပေသည်။ဤသို့ဖြင့် လူထုအနေဖြင့် အဒါလသ်မရှိ ပဲ၊ဘဝတည်ဆောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယုံကြည်မှုရလာပေမည်။ဤသို့ဖြင့် နှစ်ခြိုက် စွာ၊စိတ်ဝင်စားစွာ၊အတင်းအဓမ္မ၊အတင်းအကြပ်၊မလွဲနိုင်မရှောင်နိုင် မရှိဘဲ အဒါလသ် အားလက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
စူရာဟ်ရှိုရာဟ်အာယတ်တော်အမှတ်(၁၅)တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ နှုတ်တော်မှ စကားကို လေ့လာမှတ်သားပါမည်။
وَأُمِرْتُ لاِعْدِلَ بَيْنَكُمُ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်သည် အသင်တို့အကြား အဒါလသ်ကို လက်တွေ့အကောင်အ ထည်ဖေါ်ဆောင်ဖို့ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူ ဖြစ်ပါသည်။
ကျော်ကြားသည့်ဖြစ်ရပ်မှန် တစ်ခုဖြစ်သည့် ဟိုနှိုင်းစစ်ပွဲတွင် စစ်ပွဲရဥစ္စာ၊ ပစ္စည်းများခွဲဝေမှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။အီမာန်အားနည်းသည့် သာဝကတော်များမှ တစ် ပါးသည် ခွဲဝေမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကိုယ်တော်အားစောဒက တက်လျောက်လေ၏။
لَمْ اَرَكَ عَدَلْتَ
အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်အကြားတွင် အသင်သည် အဒါလသ်တော်ဖြင့် အလုပ်မလုပ်ခဲ့ချေ။
وَيْلَكَ! اِذا لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدى فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ
အဓိပ္ပါယ်။။အသင်အတွက် ဝိုင်(ဂျဟန္နမ်၏နေရာတစ်ခုအမည်)ဖြစ်၏။ကျွန်တော်အ နေဖြင့် အဒါလသ်ဖြင့် မဆက်ဆံလျှင် မည်သူထံတွင် အဒါလသ်ဖြင့် ဆက်ဆံမှုကိုရရှိ လိမ့်မည်နည်း?
ဤအတွက်ကြောင့် မုချဧကန် အဒါလသ်(တရားမျှတမှု၊ကျောသား၊ရင်သားမခွဲ ခြားမှု)သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)တို့မှအဓိက ရည်ရွယ်ချက်များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
အဒါလသ်ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ အရာရာတိုင်းကို ၎င်း၏နေရာအစစ်၊နေရာအ မှန်တွင် ထားပေးခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ဇိုလ်မ်ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ အရာဝတ္တုများ၊ ဥပဒေသများကို ၎င်းတို့၏နေရာမှန်၊နေရာစစ်တွင် မထားဘဲဆန့်ကျင်ဘက် နေရာ တွင်ထားခြင်း၊ဖရိုဖရဲပြုခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါသည်။
عدل چه بود وضع اندر موضعش *** ظلم چه بود وضع در نام وضعش
မှတ်ချက်။။ဤကဗျာ၏ဆိုလိုချက် အဓိပ္ပါယ်မှာအထက်ဖေါ်ပြပါ အဒါလသ်(عدالت)နှင့် ဇိုလ်မ်(ظلم)အတိုင်းပဲ သဘောကိုဆောင် နေပေသည်။ဘာသာပြန်ဆိုသူ။
ဤအတွက်ကြောင့် အဒါလသ်သည် တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)၏ အဓိက ထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားသာလျှင် မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာအပေါ်လွမ်းမိုးရမည့် ဥပဒေလည်း ဖြစ်ပေသည်။စကြာဝဌာသည်လည်း အဒါလသ်ဆိုသည့် ဝန်ပေါ်တွင် လှည့်ပတ်နေပေသည်။ဤအတွက်ကြောင့် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့် တင်ပြမိန့်ဆိုတော် မူထားပါသည်။
بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَالاْرْضُ
သာဓကအားဖြင့် ကောင်းကင်ယံရှိ ဂြိုလ်များတိုင်းသည် မိမိတို့၏နေရာတွင် စ နစ်တကျလှည့်ပတ်နေကြပေသည်။ဤကဲ့သို့လှည့်ပတ်ရခြင်း၏ရလာဒ်မှာတရားမျှတ သည့် ဆွဲငင်အားကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။နှုန်းနှင့် ပတ်ရမည့်လမ်းကြောင်းလည်း သတ် မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ထို့ပြင်ဂြိုလ်များသည် မိမိဝန်ရိုးပေါ်နှင့် အခြားဂြိုလ်များ၏ ဝန်ရိုးပေါ်တွင်လည်း လှည့်ပတ်နေပါသည်။ကြယ်၊နက္ခတာရာများလည်းပဲ ဂြိုလ်များ နှင့်အတူ မိမိတို့၏ သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ရှိနေပေသည်။
ဤတိကျမှန်ကန်သည့်စနစ်သည် ကမ္ဘာဖန်ဆင်းမှု၏ အဒါလသ် ဖြစ်ပေသည်။ အခြားတဖက်တွင်လည်း လူသားအနေဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးပေးရသည့် ရောဂါသုံးမျိုး ရှိပေသည်။၎င်းတို့မှာ ကင်ဆာရောဂါ၊ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကင်ဆာရောဂါဆိုသည်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာရှိဆဲလ်များ မိမိလမ်းကြောင်းမှ ဖေါက် ပြန်ခြင်း၊အချိုးကျတရားမျှတသည့် လမ်းကြောင်းမှလွဲသွားခြင်း၊ ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးရလာဒ်မှာ မနုဿလူသားသည် သေဆုံးသွားရပေလိမ့်မည်။
ဤအတွက်ရှင်းပြရမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာရှိဆဲလ်များသည် အမြဲတမ်းအသစ် လည်နေပေသည်။အချို့ဆဲလ်များသည် သေကြေ၊ပျက်ဆီးသွားပြီး၊အချို့ဆဲလ်များ မှာ ကျန်ရစ်ပြီး ဆလ်ပွားမှုကို ဆောင်ရွက်ပေသည်။
ဆလ်ပွားမှုသည် အထူးအစီအစဉ်နှင့် အချိုးကျတရားမျှတသည့် အထူးအခြေ အနေပုံသဏ္ဍန်အရ ဖြစ်ပေသည်။အကယ်၍ ဤ အချိုးကျတရားမျှတသည် မညီ၊ မညွတ် အစီအစဉ်မကျဖြစ်လျှင် ဆဲလ်များဖရို၊ဖရဲဖြင့်ဖေါ်က်ပြန်တော့သည်။မနာခံမှု များကို ဖြစ်စေပေသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ၏လိုအပ်သည်ထက် ပိုပြီးဆလ်ပွားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါက ကင် ဆာရောဂါ ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ပြီးနောက်မနုဿလူသားအား ကင်ဆာ ရောဂါသည် ဘဝကို ဖြစ်စေပါသည်။ဤအတွက်ကြောင့် ဆလ်ပွားမှုဖရို၊ဖရဲဖြစ်မည်။ လွဲသွားမမည်ဆိုလျှင် သာဓကအားဖြင့် စနစ်တကျအချိုးကျ တရားမျှတသည့်လမ်း ကြောင်း လမ်းလွဲသွားခြင်းဖြစ်ပေသည်။အဆုံးတွင် ကင်ဆာရာဂါဖြစ်ရပေသည်။ကင် ဆာရောဂါ၏ နောက်ဆုံး(အဖြေမှာ)မနုဿလူသား၏ သေဆုံးခြင်းအဖြစ်သို့ ရောက်
ခန္ဓာကိုယ်မှသွေးသည် သွေးကြောမှ အပြင်သို့ထွက်လာမည်ဆိုလျှင် အလျှင် အမြန်ခဲ သွားပေမည်။သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိ သွေးကြောများတွင် အသွား အလာရှိပြီး ဗီတာမင်(K)ရှိနေသမျှ မခဲချေ။အကယ်၍ သွေးသည်အတွင်းသွေးကြော တွင် အပ်၏ထိပ်ဖျားမျှပင် ခဲသွားမည်။ပြီးနောက်ခဲသည့်သွေးစလေးသည် အဆုံးတွင် ဦးနှောက်သွေးကြော အသေးလေးမှတဆင့် ဦးနှောက်ထံရောက်မည်။ပြီးနောက်ဦး နှောက်သွေးကြောအား လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုဖြင့် ပျက်စီးလိုက်မည်ဆိုလျှင်ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ်သွား ပေမည်။ထိုနည်းတူစွာအဆုံးတွင် နှလုံးသွေးကြောများမှတဆင့် နှလုံးထံရောက်မည် နှလုံးသွေးကြောအား နည်းလမ်းတမျိုးမျိုးဖြင့်ပျက်စီးမည်ဆိုလျှင် နှလုံးသွေးကြောပိတ် သွားပေမည်။
ဤကဲ့သို့သော်အခြေအနေသည် သွေးများ၏အချိုးအစားနည်းလမ်းမမှန်တော့ ချိန်၊တရားမမျှမတော့ချိန် ဖရိုဖရဲဖြစ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်သည် ကူဖာမြို့သူ၊မြို့သားများထံရေးသားခဲ့ သည့် စာတစ်စောင်တွင် မိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှတစ်ခု ဖြစ်သည့်ဇွာလေမ်များ (မတရားသတ်ဖြတ်၊နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း လူမဆန်သူများ)၏ ဇိုလ်မ်မိုစေသမ်(မတရား၊ သတ်ဖြတ်၊နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်းလူမဆန်သူမှုများ)ကိုတားဆီးပိတ်ပင်ရန်နှင့် အဒါလသ် ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ဖြစ်ကြောင်းသီကုံးထားတော်မူလေ၏။ပြီး နောက်မိန့်တော်မူသည်မှာ
امّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله ) قَدْ قالَ فِي حَياتِهِ: مَنْ رَأى سُلْطاناً جائِراً مُسْتَحِلاّ لِحُرُمِ اللهِ، ناكِثاً لِعَهْدِ اللهِ، مُخالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، يَعْمَلُ فِي عِبادِ اللهِ بِالاْثْمِ وَالْعُدْوانِ، ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْل وَلابِفِعْل، كانَ حَقِيقاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ
အဓိပ္ပါယ်။။ထို့နောက် မုချဧကန်မလွဲ အသင်တို့၏ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်မိမိ ၏ဘဝ အသက်ရှင်သန်နေတော်မူသည့် အချိန်မိန့်တော်မူခဲ့သည်ကို သိပေသည်။ (မိန့်တော်မူသည်မှာ)မည်သူမဆို(မတရားသတ်ဖြတ်၊နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း၊ရက်စက်မှု များ၏ အာနိသင်ကြောင့်)အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် ဟရမ်အဖြစ်ခွင့်မပြု ထားသည့်အရာများကို ဟလာလ်ဟုသတ်မှတ်မည်။ကတိနှင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် ၏ ပဋိညာဉ်များကို ချိုးဖေါက်မည်။ပြီးနောက် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်တမန်တော် မြတ်(ဆွ)၏ စွန္နတ်တော်နှင့် ဘဝကိုတည်ဆောက်မှုကို ဆန့်ကျင်မည်။အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ အဖန်ဆင်းခံများအကြား ဂိုနာကိုဂရုမပြုဘဲ၊ရန်အငြိုးအတေးဖြင့် ဆက် ဆံမည်ဆိုလျှင်၊ဤကဲ့သို့သော်အစိုးရမင်းအာဏာပိုင်၏အရှေ့တွင် ဆန့်ကျင်သည့်မိမိ ၏ပြောဆိုမှု၊ဆက်ဆံမှုကို မည်သူမျှမပြမည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် သည် ဤကဲ့သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်အား ဤမတရားသတ်ဖြတ်၊နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း၊ရက်စက် သည့်အာဏာရှင်နှင့်အတူ သတ်မှတ်တော်မူပေမည်။(နောက်ဆုံးလုပ်ရပ်တွင် နှစ်ဦးစ လုံးသည် တစ်ခုတည်းဖြစ်ပေမည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဤစာလွှာဖြင့် အပြင်ပိုင်းအရ ကူဖာမြို့သူ၊မြို့ သားများကို တိုက်ရိုက်ရေးသားထားသော်လည်း အမှန်တကယ်၊အစစ်အမှန်သည် (စစ်မှန်သည့်)လွတ်လပ်ရေးကို လိုလားသည့် ကမ္ဘာလူသားတိုင်းကို တိုက်ရိုက်မိန့်ဆို ထားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မှ မိန့်မှာချက်ဖြစ်သည့် မတရားသတ်ဖြတ်၊နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း၊ရက်စက်မှု၊တရားမမျှတမှု၊ ကျောသား၊ရင်သားခွဲခြားမှုတို့အား တော်လှန်ရန်အကြောင်းကို ပို့ချတော်မူခဲ့လေ သည်။ထို့ပြင် မိမိတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို(အများသိ)ကြေငြာတော် မူခဲ့လေသည်။အားလုံးကိုလည်း ဤတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွဲရန်မေတ္တာ ရပ်ခံတော် မူခဲ့လေသည်။
တရားမမျှတသည့် ခွဲခြားမှုများ၊ထင်ရှားပြတ်သားသည့် ဇိုလ်မ်ဝါစေသမ်များ သည် တတိယခလီဖာလက်ထက်တွင် ကျယ်ပြန့်မှုကို စတင်ခဲ့လေသည်။သာဓက တစ်ခုအဖြစ် တင်ပြရလျှင် အာရပ်လူမျိုးနှင့်အာရပ်လူမျိုးမဟုတ်သူများ အကြားခွဲ ခြားမှု တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ထိုအချိန်အခါတွင် အာရပ်အား(အီမာန်နှင့် သက္ကဝါတရား များသည့်အတွက် မဟုတ်ဘဲ)အာရပ်မဟုတ်သူများထက်ပိုပြီး ဦးစားပေးခဲ့လေသည်။ သို့သော် ဤခွဲခြားမှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်သည် ဒုတိယခလီဖာလက်ထက်ကတည်းက ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။အမှန်တကယ် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)မိန့်တော်မူခဲ့ပေ သည်။
لا فَضْلَ لِعَرِبِىٍّ عَلى عَجَمِىٍّ وَلا لِعَجَمِىٍّ عَلى عَرَبِىٍّ وَلا لاِسْوَدَ عَلى اَحْمَرَ وَلا لاِحْمَرَ عَلى اَسْوَدَ اِلاَّ بِالتَّقْوى
အဓိပ္ပါယ်။။အာရပ်သည် အာရပ်မဟုတ်သူထက် မမြင့်မြတ်ချေ။အာရပ်မဟုတ်သူ သည် အာရပ်ထက် လူမဲသည် လူနီထက်၊လူနီသည် လူမဲထက် မမြင့်မြတ်ချေ။သို့ သော်(မြင့်မြတ်မှုကို ပေးသည့်အရာမှ)သက္ကဝါယေအေလာဟီ ဖြစ်ပေသည်။
ဇိုလ်ဝါစေသမ်သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြီးထွားလာခဲ့ရာ တတိယခလီဖာလက် ထက်တွင် အားကောင်းသွားခဲ့လေသည်။သူ့လက်ထက်တွင် ဇိုလ်ဝါစေသမ်သည် အထွတ်အထိပ်အထိ ရောက်ခဲ့လေသည်။ဗိုင်သွလ်မာလ်(ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေ)သည် ဗနီအိုမိုင်ယာ၏ အထူးပုဂ္ဂိုလ်များ လက်သို့ရောက်သွားလေ၏။ရာထူးများ၊နေရာများ၊ ခုံများအား အရည်အချင်းနှင့် သင့်လျော်မှုမရှိဘဲ ဗနီအိုမိုင်ယာများအကြား ခွဲဝေပြီး ဖြစ်သွားလေသည်။
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဤမတရားမှု၊နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်းမှု စသည်တို့ကြောင့် အစိုးရ အာဏာပိုင်အား မကောင်းမြင်လာကြပြီး တော်လှန်မှုများ၊ဆန့်ကျင်မှုများ ပြု လုပ်ခဲ့ကြလေသည်။
အဟ်လေစွန္နတ်အနေဖြင့် ဆွဲခြင်း၊ထုတ်ဖေါ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ(မဒီနာရွှေမြို့ တော်မှ အပြင်ဖက်သို့ထွက်ရသည့် အကြောင်းအရာများမှာ အမြင်မကောင်းမှုနှင့် တော်လှန်ရေးကြောင့်ဟု)ဆိုထားပါသည်။အကယ်၍ ဤစကားသည် မှန်ကန်သည် ဟုပင် သဘောထားပါအုန်း၊အဘယ်ကြောင့် မဒီနာရွှေမြို့တော်ရှိ ပြည်သူလူထုသည် အထူးသဖြင့် မိုဟာဂျေများနှင့် အန်ဆွာများသည် ဤအဖြစ်အပျက်များရှေ့တွင် နှုတ် ပိတ် ခဲ့ကြလေသည်။ထို့ပြင် အစိုးရ၊အာဏာရှင်ဖက်မှလည်း မကာကွယ်ခဲ့ကြချေ။
ဤအတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့်လည်း အစိုးရ၊အာဏာပိုင်ကို မနှစ်သက် ကြောင်း သိနိုင်ပေသည်။
ဟဇရတ်အလီ(အ.စ)အနေဖြင့် ဟဇရတ်အွစ်မန်ကို ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆက် သွယ်ပြီး ၎င်းကိုဆိုဆုံးမ ခဲ့လေသည်။၎င်းအား မိမိ၏အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေသည့် အလုပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အန္တရာယ်ကြီးကြောင်းကို အသိပေးခဲ့လေသည်။သို့သော် လည်းပဲ ဟဇရတ်အွစ်မန်အနေဖြင့် ကိုယ်တော်အလီ(အ.စ)၏ အသိပေးဆိုဆုံးမမှု များကို ဂရုမပြုခဲ့ပေ။ပြီးနောက် မိမိ၏လမ်းအတိုင်း ဆက်လျှောက်လေ၏။ဤသို့ဖြစ် သင့်မဖြစ်သင့်စရာများ ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။
မိုအာဝေယာ၏လက်ထက်တွင် အခြေအနေပိုပြီးဆိုးရွားလာလေ၏။မိုအာဝေ ယာအနေဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၏ မှန်ကန်သည့် ဗေလာဖွဇ် ကိုယ်စားလှယ်တော် ဟဇရတ်အလီ(အ.စ)အနီးအနား တစ်ဝိုက်ရှိ ပြန့်နှံ့နေသည့် ဆွာဟာဗာတော်များ အီ မာန်အားနည်းသူများကို ဝယ်ယူဖို့ မည်မျှများပြားသည့် ငွေကြေးအဿပြာအမြောက် အများကို သုံးခဲ့ကြောင်း မည်သူတစ်ဦး၊တစ်ယောက်မျှ(အမှန်တရားလက်ခံသူမြတ်နိုး သူ)မငြင်းဆိုနိုင်ချေ။ဤအလုပ်ထက်ပိုပြီး ဇိုလ်မ်ရှိနိုင်ပါသလား? အကြောင်းမှာမွတ်စ လင်လူထုပိုင်ဘဏ္ဍာငွေ အများအပြားဖြင့် အစ္စလာမ်ကမ္ဘာ၏ဒုတိယအရေးအကြီးဆုံး၊ အမြင့်မြတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့် ဟဇရတ်အလီ(အ.စ)အား ဆန့်ကျင်ပြီး၊မကောင်းကြံ ကျပြီး ဟဒီးစ်အတုများ ရေးသားသီကုံးရာတွင်(တရားမဝင်)အသုံးပြု ခဲ့ကြလေသည်။ အစ္စလာမ်အတွက် အရေးအကြီးတကာ့အကြီးဆုံး ရန်သူဖြစ်သည့် ဗနီအိုမိုင်ယာ၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် ဟဒီးစ်အတုများကို ရေးသားရာတွင်(မွတ်စလင် ဘဏ္ဍာငွေ အမြောက်အများကို တရားမဝင် သုံးစွဲခဲ့လေသည်။
အံ့ဩစရာကောင်းသည့်အချက်မှာ မိုအာဝေယာနှင့် ယဇီးဒ်(လ.န)နှင့် အခြား ဇွာလင်မ် ဗနီအိုမိုင်ယာတို့၏ ရာဇဝတ်မှုများ၊ပြစ်မှုများအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်ပြီးတင် ပြသည့်အချိန်တွင် ညီနောင်၊စွန်နီများအနေဖြင့် ဤဝါကျကို သုံးလေ့ရှိပေသည်။ထိုဝါ ကျမှာ(၎င်းတို့သည် မိုဂျသဟစ်များ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး မိမိတို့၏ဖသ်ဝါနှင့်အညီ အလုပ်လုပ် ခဲ့ကြပေသည်။မိုဂျသဟစ်သည်လည်းဘဲ အမှားအယွင်းနှင့် မကင်းနိုင်ချေ။)၎င်းတို့၏ ရာဇဝတ်မှုများ၊ပြစ်မှု၊ဒုစရိုက်များအားလုံးကို အကြောင်းပြချက်များ ထုတ်ကြလေ သည်။သို့သော်အမှန်တကယ် ဤကဲ့သို့သော် ရယ်စရာအကြောင်းပြချက်များဖြင့် ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်း၊ကြီးမားသည့် ရာဇဝတ်မှုများ၊ပြစ်မှု၊ဒုစရိုက်များ၊မကြုံဖူးသည့်ပြစ်မှု များကို အကြောင်းပြနိုင်ပါသလား? ကမ္ဘာအသိဥာဏ်ရှင်များအနေဖြင့် ဦးနှောက်ရှိသူ များအနေဖြင့် ဤကဲ့သို့သော် အကြောင်းပြချက်များကို လက်ခံသဘောတူနိုင်ပါသ လား?
မိုအာဝေယာဇီဝိန်ချုပ်ပြီးနောက် ယဇီးဒ်(လ.န)သည် နန်းတက်လာပြီး ဇိုလ်မ် နှင့် အဒါလသ်မဲ့မှုများသည်လည်းပဲ ပိုမိုပြီးကြီးထွား လာပေသည်။အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သွားခဲ့လေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် တိကျခိုင်လုံသည့် မဟာ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏မိန့်ခွန်းတော်အရ ဇွာလင်မ်များ၊ရာဇဝတ်သားများ၊ပြစ်မှု၊ ဒုစရိုက်များ၏ ဇိုလ်မ်ရှေ့တွင် နှုတ်ဆိတ်မနေရန် မိန့်တော်မူထားသည့်အတိုင်း တော် လှန်ရေး စစ်ပွဲ ဆင်နွဲခဲ့ပေသည်။ဤတော်လှန်ရေးကို ရှဟာဒသ်ဘွဲ့ခံယူသည့်အထိ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကို ဆက်လက်ဆင်နွဲခဲ့လေသည်။
ဤသို့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွဲခြင်းဖြင့် တကမ္ဘာလုံး၊တလောကလုံးအနေ ဖြင့် ယဇီးဒ်(လ.န)၏ အချုပ်အချာ၊အာဏာအစိုးရသည် မဟာတမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏ အစိုးရမဟုတ်ကြောင်း သိသွားစေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ကမ္ဘာထောင့်၊ထောင့်ရှိ နေရာများတွင် လူဦးရေတိုးတက်နေသည့် မွတ်စလင်ဖြစ်စများအနေဖြင့် စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာ အစစ်အမှန်ဆိုသည်မှာ ဗနီအိုမိုင်ယာနှင့် ယဇီးဒ်(လ.န)တို့ သာသ နာပြု ကြိုးပမ်းခဲ့သည် သာသနာမဟုတ်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်အောင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူ ခဲ့လေသည်။
ဤအေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ လုပ်ဆောင်မှုသည် အလွန်တရာ အရေးကြီး ပြီး တန်ဖိုးလည်းရှိပေသည်။
အဇါဒါရီပြုလုပ်သူများအားလုံးနှင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သခင်အား အချစ် ထားသောသူများ၊နောက်လိုက်၊နောက်သားများအားလုံး၏ တာဝန်ဝတ္တရားမှာလူ အသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တရားမျှတမှု၊ကျောသား၊ရင်သားမခွဲခြားမှု၊လက် တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရပေ မည်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အဒါလသ်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဖိတ်ခေါ် မေတ္တာရပ်ခံရပေ မည်။
မလွဲမသွေ နှစ်စဉ်၊နှစ်တိုင်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု အစီအစဉ်ကိုတိုးတက်သထက် တိုးတက်အောင်၊ကျယ်ပြန့်သထက်ကျယ်ပြန့်အောင် ဆောင်ရွက်ရပေမည်။သို့သော် လည်းပဲ ဤကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ မလွဲမသွေ သတ်ဖြတ်မှု၊နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း မှု၊ရက်စက်မှု၊အနိုင်ကျင့်မှုနှင့် မတရားမှု ကျောသား၊ရင်သားခွဲခြားမှုကိုလည်း တွေ့ခဲ့ မြင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် တိုက်ထုတ်ချေမှုန်းရပေမည်။မဇလူးမ်(အနှိပ်စက်၊အညှဉ်းပန်း…ခံ ရသူများ)ကို ဖေးမကူညီပေးရမည်။
၎င်းတို့ကို ဇွာလင်မ်များ၊ရာဇဝတ်သားများ၊ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၊မသူတော်များ လက်မှ ကယ်တင်ရပေမည်။အကြောင်းမှာ ဤမဂျလစ်တော်များကျင်းပရခြင်း၊ဝမ်း နည်းကြေကွဲမှုများကျင်းပရခြင်းမှာ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက်တော် များကို တင်ပြနိုင်ရန်အတွက် နိဒါန်းဖြစ်ပေသည်။ပြီးနောက် အောင်မြင်မှုရလာမည့် ထိုနေ့ (အေမာမ်မေဇမန်(အ.ဂျ)ပွင့်တော်မူမည့်နေ့) အဖြင့် မျှော်လင့်ပြီး လက်တွေ့အ ကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်ရပေမည်။
မြင့်မြတ်သည့် အမိမြေကို ကာကွယ်ခြင်း နှစ် ၄၀ မြောက် မိန့်ခွန်း ရဲဟ်ဗရ် မိန့်ကြား ။ ။ photos
စကျတငျဘာ ၂၁, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၈ ညနေ
နေတန်ယာဟု အိမ်ရှေ့ တွင် အစ္စရေး ပြည်သူများ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြ ။ ။ photos
စကျတငျဘာ ၂၁, ၂၀၂၀ - ၁၁:၂၉ ညနေ